बजारमा बिक्री हुन थाल्यो कोरोनाको भ्याक्सिन, कति पर्छ एक डोजको मूल्य ? « Salleri Khabar
बजारमा बिक्री हुन थाल्यो कोरोनाको भ्याक्सिन, कति पर्छ एक डोजको मूल्य ?
३१ बैशाख, एजेन्सी । भारतको औषधि नियामक निकायले कोभिड–१९ विरुद्धको रुसी स्पुतनिक भी खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएसँगै भारतीय बजारमा बिक्री हुन थालेको छ । डा रेड्डीज ल्याबोरेटिजको कस्टम फर्मा सर्भिसेजका प्रमुख दीपक साप्राले भारतीय शहर हैदराबादस्थित रेड्डीजको एक औषधि पसलमा पहिलो खोप लगाएर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको छ ।
भारतमा डा रेड्डीज ल्याबोरेटिजले रुसी स्पुतनिक भी खोप आयात गरिरहेको छ ।